NOOCA DIY EE LOOGU TALAGALAY DIGAAGGA: DOORASHADA XULASHADA IYO HABKA WAX SOO SAARKA - COOP DIGAAG
Laga yaabe, in mulkiile kasta ee guri gaar loo leeyahay, qoysku wuxuu bilaabay kor u kaca digaagga. Tani ma ahan wax la yaab leh, maadaama ay daryeelayaan maaha mid adag, mar walbana waxaa jiri doona ukunta cusub. Dhowr sano ka dib haynta digaaga ayaa loo jaraa hilibka. Kala duwan ee ugu jecel iyo caan ah ee digaag waa layers. Ukumahoodu waa weyn yihiin oo ka sii fiican. Siinta ukumaynta si ay u noqoto mid guul leh, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qalabeeyo hen ah digaagga, taas oo gacanta lagu samayn karo. Tani waxay kor u qaadi doontaa tayada iyo tirada badeecada, iyo sidoo kale ka ilaali dhaawaca qolofka. Maqaalkani waxaan ku sharxi doonaa sida loo sameeyo buul kabaha ah ee digaagada gacmahaaga.
Ujeedada iyo noocyada hudheelada digaagga
In guri kasta hen buulkaba loogu talagalay digaagga - qayb muhiim ah. Buul-looxa loo dhigo digaaggu waa lagama maarmaan si ukumo aan loo kala qaybin coop digaaga. Sidaas darteed waxaad xakameyn kartaa waxsoosaarka digaaggaaga.
Ma taqaanaa? Kuwa u dhashay digaagga guryaha wakhti dheer waxay yiraahdaan hubaal haddii ay jiraan hareeraha digaagga huurka guriga, tayada ukumaha ayaa aad u sii fiicnaanaya.
Buuryadu waxay sidoo kale ka hortagayaan ukumaha in ay ku dhuftaan, oo ay nadiif yihiin. Qiyaasta ugu wanaagsan ee buulshada digaagga ee centimetres waa 25 x 35 x 35.
Buulka caadiga ah
Si loo sameeyo buulasho caadi ah uma baahnid waxyaabo badan iyo xoogag. Tusaale ahaan, waxaad qaadan kartaa sanduuqa caadiga ee khudaarta. Si aad u dhigto ukumaha waxaad u baahan tahay isla goobta isku midka ah, taas oo laga soo dhejin karo nalalka fudud. Ku rid caws ama cawska hoose iyo buulkuna waa diyaar. Haddii aad haysato guri ku filan, waxay noqon doontaa mid ku haboon inaad sameysid meelo dhagxaan ah sida bateriga. Intee in le'eg ayaad u baahan tahay buulal badan oo ku yaala digaagga, adoo adeegsanaya naqshad la mid ah waxaad awoodi doontaa inaad sameyso wax kasta waqtiga ugu gaaban.
Buulkuu ku yaal foomka waabarada
Buulkuu ku yaal foomka waabarada Waxay u egtahay mid la mid ah sida boorka doggie. Waa arrin aad u fudud in la sameeyo qaab-dhismeedka noocan oo kale ah: mabda'a waa isku mid sida tan buulka caadiga ah. Kaliya derbiga hore waa kala duwan yahay, cabirka buulkuna wuxuu ka madax bannaan yahay nooca. Mabda 'ahaan, waxaad samayn kartaa taxane ah taxane, haddii aad haysato wax badan oo digaag ah.
Haddii maalintii aad haysato waqti yar oo aad ku hubiso ukumaha, markaas haysashada buul leh oo leh ukunta ukunta waa mid aad u sahlan. Sida waayo-aragnimadu muujinayso, si aad u sameysid cayayaanka noocan ahi maaha mid adag. Buulada leh sanduuqa ukunta way ka duwan tahay kuwa kale in hoosta ay tahay inay la socoto mid yar. Marka shimbirta ay kacsan tahay, ficil ahaan ma taabto ukunta, waxay u dhexeysaa saxanka diyaarsan.
Doorashada meel buul leh
Ka hor intaadan jilicsan haysan ukumaha, waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto meesha ay noqon doonaan. Doorashada meel loogu talagalay buulka aabaha guriga, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u dhigto. Meelaha qoyan waxaa wanaagsan in aan la dhigin buul loogu talagalay hen, tan microclimate xumaynaya hargabka ee digaagga, iyo tani, si kastaba, waxay si xun u saameyn doontaa wax soo saarkooda. Sidoo kale laguma talin in la dhigo buulal u dhow albaabka guriga hargabka. Waxba dhib ma leh sida aad u maamuli laheyd buulka digaagga markaad ku fariisato qabyo-qabad, waxay ku jiri karaan jiran, iyo ukumahaaga ayaa dhici doona. Markaad doorato meel, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo dhererka dabaqa sare, waa inay ahaataa ugu yaraan 30 cm, iyo barafka waa in uu ahaado 10 cm laga bilaabo gelitaanka coop digaaga. Isticmaal caws ama caws dhoobo.
Ma taqaanaa? Si loo daboolo dhulka hoostiisa, waxaa hoos loo dhigi karaa mesh.
Meelaha hareeraha meelaha mugdiga ah. Sanduuqyada lakabyada laguma talinayo in lagu rakibo derbiyada, tan iyo xilliga qaboobaha waxay ka soo bixi doonaan qabow, iyo dhismaha laftiisu waa yarayn doonaa. Buulka gacan-qabsiga ee hoyga waa inuu ahaado mid raaxo leh oo keliya digaagga, laakiin sidoo kale adiga. Waa lagama maarmaan in ay jirto bilaash bilaash ah in la uruuriyo ukumaha iyo nadiifinta buulka. Haddii digaagu uusan ukumo ku jirin goobta la soo jeediyay, cayayaanka noocan ah waa in dib loo noqdaa.
Sida loo sameeyo buul loogu talagalay digaagga: qalabka iyo alaabta
Tan iyo samaynta buulki shimbiraha leh gacmahaaga waa mid sahlan, uma baahnid inaad aqoon u leedahay iyo xirfad gaar ah. Plywood waa qalab aad u wanaagsan, sidoo kale waa la isticmaali karaa kuraasta. Qalabku wuxuu u baahan yahay naas, naqshadeeyaha, ciddiyaha, qalabka jarida iyo waraaqaha ciidda. Laga soo bilaabo qalabka fudud iyo qalabka waxaad ka dhigi kartaa buul aad u wanaagsan.
DIY Digaagga DIY
Beeralayda intooda badani waxay doorbidaan inay buulkoodu ka samaystaan ​​hoyga iyaga oo gacmahooda iska leh, maaddaama ay suurtagal tahay in la tixgeliyo oo keliya miisaanka digaagga, laakiin sidoo kale sifooyinka dhismadooda. Waxaad sidoo kale ka dhigi kartaa buulad, iyada oo ku saleysan shuruudaha shakhsiga ah iyo rabitaanka, waxa ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo mabaadi'da aasaasiga ah.
Waa muhiim! Waxaa la aaminsan yahay in buulkeedu yahay lakabka waa in uu ahaado 25 * 35 * 35 cm oo cabbirka, halka hilibka hilibka kale ee kale loo aqoonsan yahay ugu habboon - 30 * 40 * 45 cm.
Nooca caadiga ah ee buulka
Wixii samaynta caadiga ah saarista hoolka adoo isticmaalaya gacmahaga, qaado jilbaha ama boorso una kala qeybso 3 qaybood. Qeyb kastana samee bambooyin. Ku rid caws ama hay cayayaanka buulka, kuna rid meel ka fog dhulka. Marka xigta, jaranjarada si aad u dillaacdo.
Tilmaamaha sameynta buulkisa qaabka booth
Si aad u bilowdo, sameyso sanduuq caadi ah oo aan lahayn derbi hore. Cabbiradu waa inay ahaato sida digaaggu ay u roon tahay. Taas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dalool wareeg ah oo ku yaalla guddiga ama taangiga si ay ukuntu u fududaan karto iyada oo loo marayo. Hadda ku dheji derbiga hore, geli caws iyo cayayaanka adoo geynaya digaag gacmahaaga u diyaarsan, sawirada hoos ku qoran waxaad arki kartaa sawirada.
Naqshadeynta iyo sawirada buulkaga leh ukunta
Buulka Eggbed waxaa lagu samayn karaa qaab ah buul caadi ah ama qaab boorso ah. Farqiga keliya ayaa ah in hoosta ay tahay in la yareeyo.
Waa muhiim! Miisaan tobanle ah ayaa ku filan. Meelaha dhaadheer oo badan ayaa kordhiya fursadda waxyeello u geysata ukunta.
Cabbirka buulaha noocaan oo kale ah ee loo yaqaan 'hen' ma kala duwanaan doono. Hoosta, hoosta hoose, waxaan ku dhejinaynaa saxaarad yar. Sida saxda ah, waxaad isticmaali kartaa weel kasta oo caag ah, tusaale ahaan saxaarad ka soo qaboojiyaha. In buug sidaas oo kale uma baahna in la dhigo caws badan ama cagaarka, sida ukunta waa in si xor ah u soo saarto. Way ka fiican tahay in la dhigo qashin ka badan saxarada si ay ukumuhu u jebiyaan marka ay soo baxaan.
Sida loo sameeyo duufaannada dabaqyada (Palallets) gacmahaaga
Noocyo strawberry "Vicoda"
Tani waa mid aan la dabooli karin "Aporocactus" (Dysocactus): noocyada iyo sawirrada dhirta
Waa maxay faa'iido leh iyo sida loo qaato qashinka?
Dhibaatooyinka sii kordhaya ee Hovei: sababta caleemaha ka baxo qalalan
Ereyga "lo'da", qaar badan oo naga mid ah ayaa qiyaasi kara madow iyo caddaan muuqaal leh oo leh jajab ballaaran. Tani waa sida buuraha buuraha - wakiilada caleemaha, mid ka mid ah saddexda ugu caansan Russia, waxay u eg tahay. Lo'da Kholmogory waxaa si fiican loogu habeeyey cimilada qaboobaha, caanahana waxay leeyihiin waxyaabo dufan badan iyo dhadhan fiican. Read More
Pig's colibacteriosis: jirada, tallaalka, isbeddelada wadnaha, daaweynta
Noocyada waxay gashadaan madow, cagaaran, jaalle ah iyo caddaan. Faa'iido iyo bogsiin guryaha
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Coop digaag 2020